Dr. Abdullahi Adan Mohamoud, MSF Mashruuca – Isbitaalka koonfurta Gaalkacyo - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Dr. Abdullahi Adan Mohamoud, MSF Mashruuca – Isbitaalka koonfurta Gaalkacyo
10.11.2009 | Gobolka Mudug, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya
Maxay u yahay qalabka (adeega) qaliin ee MSF ee Konfurta Galkacyo mid aad muhiim u ah?
Adeega qaliin ee MSF ee Galkacyo waa mid aad muhiim u ah sababta oo ah waa adega kaliya ee qalineed oo lacag la’aanta ah ee ku yaala gobol ay saameeyeen iska-horimaadyada badanaaba soo noq-noqnaya.Waxuu u adeegaa (daboolaa bahida) in badan oo ku nool magaalooyinka iyo tulooyinka ka dugugsan ilaa iyo Dhusa mareeb (taqriiban 240 KM).Dadka ku nool gobolkan (aagan) waa dad fuqora ah oo aanan awodin qalliin qaas ah(isbataalada sida gaarka ah loo leeyahay), kaas(qaliinka) oo qiimahiisa aad u sareeyo. Waxaa intaaas sii dheer, waxaa jira tiro aad u yar oo dhakhaatiirta qaliinka kuwaas oo badankood ku sugan Muqdisho, oo aad uga fog Galkacyo (taqriiban 730 Km).
Qaliinada nuucyee ayaad samaysaan?
Waxaan samaynaa dhamaan nucyada qaliinka oo idil, inkasto oo bukaanada ku dhaawacmay dagaalada ay yihiin laba qeybood marka loo dhigo qeyb kuwa aan qaliinka ku smayno.Tan waa arin aan la saadaalin Karin oo aan xiriir ahayn sida ay dagaaladu ay yihiin oo kale.Waxaa kale oo aan fulinaa qaliinada cilmiga cuduro dersida la xiriiro ee loo yaqaano (pathological) sida xidmaha oo xirmo,qabsin/fintijiido,alsa iyo qaliinka lagu soo saaro ilmaha (C-section) oo aan ku samayno qaybta dhalmada- si aan oogu caawino dhalmada ilmaha marka ay jirto dhibatooyin.
Mudo intee la eg ayay MSF ka fidinaysay/samaynaysay Qaliin Galkacyo
Adeega qaliineed ee MSF ee Galkacyo wuxu shaqaynayaa mudo 5 sano ah.Waxaan qabtay jaqadaan aan hada ka shaqeeyo 4 bilood ka hore.Inta aan iman MSF waxay ku khasbanaatay in ay joojiso howlihii qaliinka mudo ku dhow 10 bilood. Waa arin wanaagsan in aan hada mar kale bixin karno adeega qaliinka.
Ma noo sheegi kartaa wax dhacdo cusub oo tusinayo /tilmaamayso shaqadaada ?
Daba yaaqadii October iyo bilowgii November Galkacyo waxaa soo maray dhoor iska-horimaadyo oo uu ka mid yahay qarax. Sidaas darteed isbitaalka waxaa uu qaabilay/gudoomay ilaa iyo 45 bukaan oo u badnaa rag.Qaraxa waxaa uu dhacay siqdii dhexe isbitaalkana waxaa soo buux dhaafiyay dhaawc. Nasiib daro waxaa jiray labo bukaan oo qabay dhaawacyo cul-culus waxayna ku dhinteen qolka “triage” inta aysan soo gaarin qolka qaliinka.Dadka(bukaanada) waxay qabeen dhawacyo kala duwan kuwaas oo isugu jiray dhaawac fudud iyo kuwa waaween oo caloosha iyo xididada dhiiga (vascular). Kuwa dhaawacoodu fududaa waxay u baahdeen daweyn fudud (medical) kuwa dhaawacyadoodu cuslaa sida (xiidmaha iyo mandhicrka ) waxay u baahdeen qaliin. Waan ku guulaysanay in aan badbaadino bukaan kasto oo aan qaliin ku samaynay, Hada dhamaantood wa ay miyir qaban qaarkoodna waa laga saaray isbitaalka.
Hal bukaan oo arinttisu ay si gaar ah uga duwanayd bukaada kale ayaa jiray, waxuu uu aha nin wareersan. Waxuu ka yimid waqooyiga Galkacyo, taasoo socdaal adag ah (sasbta oo ah kala qaybsanaanta magaalada ).Wuxu qabay dhoor dhaawac waxuuna u baahnaa qaliin. Hase-yeeshee xaaladiisa ayaa adkaysay in aan u helno ogolaasha daruuriga ah. Waxaa aakhiritaankii inoo suuta gashay in aan dawayno ninkii waxaa xusid mudan taageerada aan ka helnay odayaasha. Hada aad ayuu u fiicanayahay.
Sideed ku gaartay/gashay Qaliinka
Xaqiiqdii, horaantii aniga ma dooran mihnadan/ shaqadan. Waxaan ku fikirayay in aan ka cararo wadanka maadama ay dagaalada sii kordhayeen ayna gaareen heer aanan loo dul qaadan karin.Hase-yeeshee walaalkay ayaa igu diiri galiyay in aan jaamcad aado oo aan wax barto. Waxaan qaatay taladii walalkay aad ayaan oogu dadaalay wax barashadii Jaamacad Banadir.Sanadkii 2008 ayaan qalin jabiyay, waxaan ka mid ahaa kooxdii koowaad oo dhakhaatiir ah oo ka qalin jabiso ilaa iyo xiligii siyaad Bare la riday. Ka dib qalin jabintaydii waxaan aaday Isbitaal Medina si aan u helo tobobar qaliin kaas oo ay sahashay MSF.
Sideed u aragtaa Shaqadaada?
Aaad ayaan u jeclahay/ugu raaxaystaa qabashada shaqadan. Waa waxii ugu wanaagsanaa oo isoo maro. Waxaan si aad ah u jeclahay marka aan arko bukaanda oo isbitaalka ku soo laabanayo kadib daweynta eyaga oo ii mahad celinayo ina dhiiri galinayo. Tani waxay I siisa dareen guul iyo qancid.
Tags: dagaal, Dr Maslax, Gaalkacyo, qaliin
Qoraalada kale ee ku saabsan Gobolka Mudug, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya
Hawl Qalliinka Indhaha ah oo laga fuliyey Gaalkacyo, Soomaaliya
Bukaanadda qaaxada ee isbitaalka MSF ee Gaalkacyo oo ka qisoonaya noloshooda
Cod iyo Muqaal: Gaalkacyo, Soomaaliya: Isbitaalka iyo Xarumaha Caafimaadka MSF ee lacag la’aanta ah – Waa Nolosha Dadweynaha’
Qaliin indhaha oo ay MSF ka fulisay Gaalkacyo-Cod iyo Sawiro